'Sequía' bụ usoro TVE ọhụrụ nwere ihu ama ama ama | Bezzia
'Sequía' bụ usoro TVE ọhụrụ nwere ihu ama ama
Susana godoy | 01/06/2021 14:00 | Akụkọ
'Oké unwu' aburula eziokwu na TVE. N'okwu a, ọ bụghị nyiwe, nke anyị na-ekwukarị banyere ya, na-ewetara anyị akụkọ na-atọ ụtọ. O yiri ka ọwa ndị a na-emebu na-ekwukwa akụkọ ifo na n'okwu a site n'aka ndị omee ama ama ama na ndị Spen.
Maka ihe ọ dị ka ọ ga-enwe ezigbo nnabata na karịa ihe niile, maka arụmụka ya na ọ ga-emetụta dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ya mere, ihe omimi ga-adị n'akụkụ anyị mana a gha agbakwunye ya na ndi ozo anyi choro ichota. Want chọrọ ịmatakwu?
1 Gịnị bụ nkata nke 'unwu'
2 Ebe anyị ga-ahụ n'usoro
3 Kedu ihe ndị nọ na usoro ahụ?
Gịnị bụ nkata nke 'unwu'
Anyị na-amalite site na ịmara ihe anyị ga-ahụ na usoro TVE ọhụrụ a na mmekorita ya na telivishọn Portuguese. Ọfọn, ka anyị na-enwe ọganihu, ọ bụ a thriller na na-amalite site na nnukwu ihe omimi a na-edozibeghị na obodo. Ebe a ahụla ka oké ọkọchị si abanye n'ime ya. Mana n'ihi ya bụ ozu abụọ nwere ọnya egbe nke nọrọ ebe ahụ ogologo oge. Site mgbe ahụ gawa, ndị uwe ojii na-ahụ maka ịgba mbọ mezie mpụ a.
Mgbe a matara ndị bụ ndị a, ọ na-abụ ezinụlọ abụọ na-agafe ibe ha n’agbanyeghị na ha esighị n’otu ebe. Mana nke a ga - eweta ọtụtụ ihe nzuzo na njikọta zoro ezo ịpụta. Ma ọ dịkwa anyị ga-achọta aghụghọ, ịhụnanya na oke ochicho. N'ikwu okwu sara mbara, anyị nwere nchịkọta nke ihe niile ga - eme 'Unwu' otu n'ime usoro ọhụrụ ị ga - etinye na ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. Maka ugbu a, eserese na-amalite, yabụ anyị ga-eche obere oge.
Ebe anyị ga-ahụ n'usoro
N’ezie ụfọdụ ebe eserese ga-amata nke ọma, maka a ga-ebido ndekọ na mpaghara Cáceres, yana Madrid. Mana dịka anyị kwurula na ọ bụ mmekorita ya na telivishọn Portuguese, ekwesiri ịsị na mpaghara Lisbon ma ọ bụ Cascais ga-abụkwa isi gbaa, dị ka VerTele gosipụtara! Yabụ, naanị ịmara data ndị a, anyị ghọtara na ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe, n'ihi na ebe ndị ahụ nwekwara ọmarịcha mma na mgbakwunye na esemokwu ahụ nwere ike ikwu ọtụtụ ihe banyere onwe ya.
Kedu ihe ndị nọ na usoro ahụ?
N'otu aka anyị na-ahụ Rodolfo Sancho, onye anyị niile maara maka ibido n'usoro dịka 'Al ịhapụ klaasị' na itolite na ndị ọzọ dịka 'Amar n'oge nsogbu', 'Isabel' ma ọ bụ 'Ozi oge', n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Onye na-esote ya bụ onye na-eme ihe nkiri Elena Rivera onye nhazi ihe oyiyi anyị ahụla ya na 'Servir y Protecte', 'La Truth' ma ọ bụ 'Inés del alma mía'. Miryam Gallego bu aha ozo bukwara n’etiti ndi n’agha n’usoro TVE. Ma 'ndị nta akụkọ' ma 'Red ugo' ma ọ bụ 'ihe nzuzo nke steeti' nwekwara ya.
Yabụ ka anyị na-ahụ isi ihe jupụtara na nnukwu kpakpando, na-enweghị echezọ Miguel Angel Muñoz na anyị na-echeta ya site na 'Nzọụkwụ' ma ọ bụ 'Ulysses Syndrome', n'etiti ndị ọzọ. N'akụkụ ya anyị ga-ahụkwa Juan Gea, onye nwere ogologo ọrụ na telivishọn na ụwa nke sinima na ọbụlagodi n'ụwa nke ihe nkiri nwere ọtụtụ ọrụ. Onye na-eme ihe nkiri Portuguese Margarita Marinho na onye na-eme ihe nkiri Guilherme Filipe ha na-esonyekwa na ndị na-eme ihe nkiri. Dika eserese ya bidoro na mmalite oge ọkọchị, n'oge ahụ enweghi data ọzọ na usoro ahụ. Mana anyị nwere olile anya na n'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ndị nkiri niile na ndị na-eme ihe nkiri na obere enyo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » 'Sequía' bụ usoro TVE ọhụrụ nwere ihu ama ama
Uru nke spinning maka ahụike
Ndị na-agbanwe agbanwe 4 ga-ebu nri gị